Ubungqina / uphononongo lokhenketho lwaseKorea / Impendulo yokhenketho lwaseKorea / uphononongo lwe-Korea
Sifuna ukubulela ngenkxaso yohambo lwethu, yonke into ihambe kakuhle kwaye samkelwa ngononophelo olukhulu ezivela kubakhokeli, ngakumbi kuNks Kim, uhlala onwabile kwaye enononophelo kuzo zonke iinkcukacha, wayengumkhokeli ogqwesileyo kwaye noMnu John naye enomonde kakhulu nathi
Enkosi ngokusixhasa nokusivumela ukuba sikonwabele ukuhlala kwilizwe lakho
Angel Zhang kunye noClaudia Mejía
I-Etour idlule ngokulula konke okulindelekileyo esasinako ngaphambi kokuza eMzantsi Korea. Ukucwangciswa kunye neeshedyuli ezilungelelaniswe nguJoy zazigqibelele kwaye abaqhubi / abakhokeli bahlala bexesha. UNwabisa wayenobubele ngokwenene kwaye eluncedo, ephendula yonke imiyalezo yethu kwaye ecela uncedo ngokukhawuleza.
Izikhokelo zokhenketho esilungiselele zona zenze umsebenzi oncomekayo. Umnumzana Kevin eSeoul, Nksk. Kim eJeju naseHyoung Hwa eBusan-Gyeongju-Daegu basinike amaxesha amahle aya kuhlala ehleli ngaphakathi ezintliziyweni zethu. Abaqhubi babenobubele kakhulu kwaye bakhuselekile.
Ukuba unqwenela ukundwendwela eli lizwe kwaye ulonwabele ngokupheleleyo, sicebisa ukuba unxibelelane no-Etour. Baza kusebenza nawe ukuze benze amava amahle kwaye njengoko benditshilo ngaphambili, baya kulugqitha ngokulula ulindelo lwakho!
INdu. Siyithanda kakhulu indlela bonke abakhokeli ababenobubele kakhulu ukusinika iinombolo zabo zeefowuni ukuze sikwazi ukubatsalela umnxeba qho xa sifumana ingxaki okanye singazi ukuba senze ntoni kwimeko ethile (ubukhulu becala sinxulumene nolwimi).
I-Sid kunye ne-Amy Rastogi
Ubunayo iholide entle yaseMzantsi Korea ehlelwe yi-eTour. Kanye ukusuka ekunyuseni ukusuka kwi-Incheon ukuya ehleleni yethu kwi-Incheon 9 kwiintsuku emva koko, bonke abasebenzi be-eTour basikhathalele kakhulu. Iivoti ezisetyenziselwa iipikoko kunye nokhenketho zazicocekile kwaye zilungile. Abaqhubi babenembeko kakhulu kwaye basenza saziva sikhuselekile kuhambo lwethu ngokuqhuba ngendlela engaqhelekanga. Sisikelelekile ukuba noKevin njengesikhokelo sethu eSeoul naseNick njengesikhokelo sethu eGyeongju naseBusan. Lonke lolu hambo, uJoy wayehlala enxibelelana nathi kwaye wayehlala ejonge kuthi ukuze asibone ukuba siqhuba njani. Uvuyo luye lwaqinisekisa ukuba sigcinwa sinolwazi malunga nemihla ngemihla nokuba asiphoswa ziitreyini zethu kwaye sazi apho sikhona kwaye sidibana njani nabasebenzi.
Iqela lethu le-9 yayiliqela elahlukileyo nelinamalungu osapho abaneminyaka ephakathi kwe9 kunye ne-72! Sikwanayo nomxube owahlukileyo wamalungu ezityalo kunye nezityalo ezingezizo izityalo. Abasebenzi be-eTour baqinisekisile ukuba iimfuno zethu zokutya ziyaqinisekiswa. Ukhetho lwehotele kuzo zonke iidolophu ze3 -Seoul, Gyeongju kunye neBusan zazintle kwaye zahlangabezana nezidingo zethu.
Sincoma ngovuyo eTour kuye nakubani na ocwangcisa uhambo oluya eKorea!
Mna nenkosikazi yam sibuyele eSydney emva kweentsuku ze-10 zokuhlala eKorea apho iintsuku ze-7 zazikhona ngepakethi yakho yokhenketho
Ndingathanda ukuvakalisa umbulelo wam kubo bonke abasebenzi (uLeo, Tommy, Mnu Kim) ngakumbi u-Yoona ngobungcali babo kunye
Ukucingela Benza ukhenketho lwethu lwaseKorea lwaba mnandi nangakumbi Baye basenza ukuba sizive ngathi kudala siqhelene kwaye basenze saziva siphumle, sikhuselekile kwaye sikhathalelwe Ngokuqinisekileyo singafikelela kwiinkonzo zakho ukuba singaceba ukutyelela eKorea kwakhona kwaye siya kunika iingcebiso nawe futhi
Abahlobo bethu abanqwenela ukutyelela eKorea.
Ndiyabulela kwakhona kwaye kwanga inkampani yakho ingavuna impumelelo Kamsahamnida !!
Ndifikelele kwi-incheon ngokukhuselekileyo Okokuqala, ndingathanda ukubulela ngokungazenzisiyo kuwe nakubo bonke abantu osebenza nabo ngokundinika olu luhambo lumangalisayo lwe-jeju Isikhokelo sakho sokhenketho nomqhubi webhasi unobungcali kwaye unobubele Ndilonwabele kakhulu uhambo kwaye Ngokuqinisekileyo ungacebisa utyelelo lwakho nakubani na oya kwixesha elizayo.
Enkosi ngokulungiselela yonke indawo yokuhlala kunye nokhenketho ~ !!
Nge-25 yokugqibela kaDisemba, usapho lwam lwamalungu e-4 lachukunyiswa nguMnumzana Vickstone Hong kutyelelo lwethu lwangaphambi kokubhiyozela usuku olunye
Sibe nombulelo kakhulu ngokuba nesikhokelo esinye sokhenketho esaziwayo kwaye esimnandi, kangangokuba sifunde okuninzi malunga ne-South Korea kwityala elifutshane elinje Mnu. Unokwazi ukupeyinta owona mfanekiso ulungileyo welizwe lakho, ukuba abakhenkethi baphinde batyelele u-'Seoul kwelaseAsiya '
Ndiyaqhwabela izandla, kunye nemivuyo yokuncoma eTou ngokuba noMnumzana Hong kwinkampani
USalamat po Mabuhay!
Egameni leBhanki engu-Simpanan kaZwelonke kunye nabaphumeleleyo kwi-Cuti-Cuti BSN Campaign, sinqwenela ukuthatha eli thuba ukubulela ngomsebenzi owenze kakuhle ngelixa nisakhokela ukhenketho lwethu ukuya eKorea.
Ufundwe kakhulu kwaye uqhelene nobunzima bembali ende yaseKorea, esilixabisileyo imizamo yakho yokungenisa ulwazi lwakho kunye nokuthakazela kweKorea kuthi Okona kubaluleke nangakumbi, uyindoda ethambile nenobubele enesimo sengqondo esihle kunye nengqondo elungileyo Izinto ezihlekisayo ezenza ukhenketho lube nomtsalane kwaye lube mnandi.
Kwakhona, ngombulelo oshushu ngokusikhathalela kwakho kwezi ntsuku zidlulileyo ze-5, kwaye siya kuthumela iqela labakhenkethi amaxesha ngamaxesha ngeenkonzo zakho Kwakhona, uya kunconywa kakhulu kumaqabane ethu ngokunjalo !!!
Ndiyathemba ukukubona eSeoul kwixesha elizayo: D
enkosi kakhulu ngentsebenziswano yakho malunga neqela lam labantu be7 !!
Abathengi bam bafika ngokukhuselekileyo ekhaya kwaye banelisekile ziinkonzo zonke eKorea obalungiselele zona.
Ngakumbi babalaselisa iinkonzo ezigqibeleleyo zesikhokelo sakho sokhenketho uMiss Mini.
Enkosi kwakhona kwaye ndikhangele phambili ekusebenzeni kwikamva eliqinisekileyo lokusebenzisana
Besibuyele ngokukhuselekileyo ePerth !! Sibe nexesha elimangalisayo eKorea Uxolo silibale ngokupheleleyo malunga nefom yesaveyi ekufuneka igqityiwe kwaye idluliselwe ku-Eric nge-6th Day.
Ngapha koko, bendigqibile ukuyigqiba kwaye ndiyikhuphe apha.
Kwakhona, ndiyabulela ngenkonzo entle kakhulu kwaye nilungiselele ukhenketho lwethu lokuqala lokuya e-korea!
Sikwafuna ukumdumisa uEric ngomsebenzi wakhe ogqwesileyo wokuba sisikhokelo sokhenketho Ngokuqinisekileyo siya kumcebisa kubahlobo bethu Enye into ebalulekileyo ngoluhambo kukuba senza abahlobo apha endleleni kwaye ngokuqinisekileyo uEric uza kuba ngumhlobo olungileyo kuthi
Enkosi kwaye siza kubona kwakhona kwi-korea kwakhona kungekudala!
UCaroline no-Eric Meyer
Mna no-Eric sibuyele ekhaya sivela eKorea ngokuhlwanje
Yonke into ihambe kakuhle kwaye sibathanda bonke abakhokeli bethu, uRebecca, uJessica, uKorea uEric kunye nesikhokelo sethu sikaJeju uLowell
Abaqhubi babehlala befika ngexesha okanye kwangethuba kwaye bekulula ukufumana iihotele zazichaziwe.
Enkosi ngayo yonke into!
kamsahamnida ~ ~ ~ ~
Sibe nexesha elimnandi kakhulu kwi-Busan Thomas, isikhokelo sethu sokhenketho, sasintle Ngenxa yeshedyuli kunye nemidlalo ye-baseball kwaye nabahlobo bethu basaswelekile, sicela ukuba singayenzi imisebenzi ngoMvulo emva kwemini kuba oko yayiza kuba ngumdlalo omde kwaye besimhle siphelelwe ngamandla Uye endaweni yoko wasisa kwimall njengoko besimcelile ukuba enze uphando waphinda wayifumana ivenkile esasiyikhangela Wenza umsebenzi omkhulu woku-odola ukutya kwiivenkile zokutyela kwaye bonke babemiselwe kwaye belungele kuthi lonke ixesha! !!! XD
Ndingathanda ukubulela uJon ngokundikhathalela ngoMgqibelo nge-10th nge-septemba wayegcwele ulwazi malunga nesi siqithi esihle esithi nguJeju Wayeqonda isidingo sam kwaye wandityhala ngento endiyifunayo Andikunqweneli kwimyuziyam, kwipaki yomtsalane, Njani Ndikhe ndiyithanda indalo kunye nokutya uJon uye wandenza ukuba ndizame isuphu yenkukhu kwindawo ekuhlala kuyo kude nomkhenkethi owayeyibhonasi.
Xa ndibuyela eJeju (kuninzi kakhulu ukuba undityelele), ndiza kucela uJon njengoko enenqanaba lesiNgesi elikwenqanaba eliphantsi kwaye ekwazi ukugcwalisa zonke iimfuno zam !!
Imini elungileyo kuwe ndingathanda ukunika ingxelo malunga noKhenketho lwam lwaseKorea ukusuka kwi19th-23rd Nov 2016!
Umqhubi wethu / umkhokeli wethu yayinguMnumzana Thomas Kim, wayengumntu onobuhle kakhulu, egcina ixesha, engenangxaki, isikhokelo sokuthetha isiNgesi esisenza sizive sikhululekile kakhulu Wayenolwazi kwaye eguquguqukayo Siliqela labahlobo be3, sasingakwazi ukuthetha naluphi na ulwimi lwaseKorea kodwa uMnu. UThomas Kim uzimisele kakhulu ukusicacisa kwaye asibonise ukujikeleza Eyona nto ibaluleke kakhulu, uhlala eqinisekisa ukuba ukhuseleko lwethu (thina, amanenekazi e3) luyeza kuqala Nceda umbulele.
Okokugqibela kodwa kungaphelelanga apho, enkosi kuwe ngokuba nendawo yokuhlala, yonke impendulo ekhawulezileyo kunye nokusinika inkonzo ebalaseleyo yokuqinisekisa ukuba ukhenketho lwethu luhamba kakuhle.
Enkosi kakhulu ngokwenza uhambo lwethu lube nesiqhamo nesihle! 😀
Molo Jay, uxolo ngomyalezo wokufika kade, ndingathanda ukubulela kunye neqela lakho ngenkxaso yabo enkulu kunye noncedo Sichithe umzuzu omnandi kuJeju kwaye siya kuthi ngokungagungqiyo sibuyile Ngokwenyani siseSeoul siyonwabela imvula imini ahah JEJU yindawo emangalisayo endikhumbuza umzi wam wedolophu yaseReunion siqithi Sinexesha elonwabisayo kunye nomqhubi kunye nam Baek, u-Ver oqeqeshiweyo kunye nokusebenza kakuhle Kwaye wena Mnumzana uJay zonke ezo imeyile uzenze zonke zifanelekile zonke imbeko yam kunye ne-ketfeull Ngokusebenza e-China ukusukela kule minyaka i-5 idlulileyo, Bekumnandi kakhulu kwaye kumnandi ukubonana nabantu abanobubele, abanoncumo, abantu abaluncedo baseKorea, itshintshe kakhulu isuka eTshayina ahah MT Hallasan bekunzima ekugqibeleni, siyenzile ngokukhawuleza, siyazisola ngokungakhange silibone ichibi ngenxa yemozulu, thina uneentlungu ezithile zemisipha kodwa kufanelekile
Ndikunqwenelela okuhle kodwa wena neqela lakho
Ndingathanda ukubulela kwaye ngakumbi umkhokeli wethu wokuhamba, uStephan Lee, ngokumakisha uhambo losapho lwam lokuqala eSouth Korea esikhumbulekayo Siyavuya kakhulu ngenkonzo ebalaseleyo esibonelelweyo kunye nomonde kaStephan nathi Umsebenzi wakhe wobugcisa kunye nenkonzo efudumeleyo iyawenza umahluko amava ethu Siyavuya ukukwazisa ukuba besinekhephu xa sasiseSeoul, ngomhla wethu we-4th inkonzo yokudluliselwa kwesikhululo seenqwelomoya (zombini iindlela) yayikwanobungcali kakhulu kwaye imnandi
Ngokuqinisekileyo ndiza kucebisa i-arhente yakho yokhenketho kwakhona ukuba ungakhona amanye amalungu osapho lwam, abahlobo
Imigwaqo kunye nombulelo kwakhona !!
I-Sid kunye ne-Amy Rastogi uthi:
I-2018 년 Novemba 21 일 kwi6: 21 pm
Ubunayo iholide entle yaseMzantsi Korea ehlelwe yi-eTour. Kanye ukusuka ekunyuseni ukusuka kwi-Incheon ukuya ehleleni yethu kwi-Incheon 9 kwiintsuku kamva, bonke abasebenzi be-eTour basikhathalele kakhulu. Iivoti ezisetyenziselwa iipikoko kunye nokhenketho zazicocekile kwaye zilungile. Abaqhubi babenembeko kakhulu kwaye basenza saziva sikhuselekile kuhambo lwethu ngokuqhuba ngendlela engaqhelekanga. Sisikelelekile ukuba noKevin njengesikhokelo sethu eSeoul naseNick njengesikhokelo sethu eGyeongju naseBusan. Lonke lolu hambo, uJoy wayehlala enxibelelana nathi kwaye wayehlala ejonge kuthi ukuze asibone ukuba siqhuba njani. Uvuyo luye lwaqinisekisa ukuba sigcinwa sinolwazi malunga nemihla ngemihla nokuba asiphoswa ziitreyini zethu kwaye sazi apho sikhona kwaye sidibana njani nabasebenzi.